UBILLIE EILISH UBHENGEZA IALBUM ENTSHA EYONWABILEYO KUNAKUQALA - IINDABA
UBillie Eilish ubhengeza iAlbum eNtsha eyonwabileyo kunakuqala
Kusemthethweni: UBillie Eilish uveze ukuba icwecwe lakhe lesibini liyabizwa Ukonwaba kunakuqala kwaye izophuma nge-30 kaJulayi (ngeNdlu emnyama / Interscope ). Ukongeza, u-Eilish uthe uza kukhupha ingoma entsha ngalo Lwesine, u-Epreli 29. Jonga isibhengezo sakhe, kunye noluhlu lwengoma, apha ngezantsi.
Ukusukela ukukhulula istudiyo sakhe XA SILALE SONKE, SIYA PHI? Ngo-Matshi 2019, uBillie Eilish ukhuphe ii-singles yonke into endiyifunayo, akukho xesha lokufa, ikamva lam, ke ngoko NdinguLo Vas a Olvidar. I-albhamu entsha ibandakanya ikamva lam kwaye ke ndinguye. Ngokwopapasho lweendaba, u-Eilish ubhale Ukonwaba kunakuqala kunye nomntakwabo FINNEAS, naye ovelise i-LP
Emuva ngoFebruwari, uBillie Eilish uxelelwe UStephen Colbert, andicingi ukuba ngekhe ndenze ialbham efanayo, okanye nealbham kwaphela, ukuba ibingeyo-COVID. Uqhubekile, Oko akuthethi ukuba yi-COVID kwaphela, injalo, xa izinto zahlukile ebomini bakho, wahlukile. Injalo nje. Ke, kuya kufuneka ndibulele i-COVID ngaloo nto, yiyo ke loo nto.
Zonke iimveliso eziboniswe kwiPitchfork zikhethwe ngokuzimeleyo ngabahleli bethu. Nangona kunjalo, xa uthenga into ngezixhumanisi zethu zentengiso, sinokufumana ikhomishini yokubambisana.
UBillie Eilish: Wonwabe ngakumbi kunakuqala
$ 35KuRhwebo oluRhabaxa $ 35eAmazon
Ukonwaba kunakuqala :
02 Khange ndiyitshintshe inombolo yam
03 UBillie Bossa Nova
04 ikamva lam
07 Isizathu esilahlekileyo
09 Ayiloxanduva lwam
11 Wonke Umntu Uyafa
12 Amandla Akho
14 Kungoko ndikhoyo
15 Yonwaba Kunanini Na
16 Amadoda Amnandi
Lil tracy kunye lil lil
Snoop inja unyango lwekhaphethi eblue
ufile lotus endizayo
ari lennox shea ibhotolo sana
U-marilyn manson i-albhamun entsha
ithuba le-albhamu entsha ye-rapper